Dad loo ciqaabay Masaajid ay ku tukadeen | KEYDMEDIA ENGLISH
Deegaanka Suuqa Xoolaha ee degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho saakay xili lagu guda jiray salaadii Ciida ayaa waxaa halkaasi laga qafaalay Shiikh C/raxmaan Axmed Rooble oo ahaa imaamka Masaajid ku yaala deegaankaasi isla markaan shacab Muslimiin ah Salaadda Ciida ka bixinayay, waxaana wadaadka loola dhaqaaqay goob aan la aqoon.
Sidoo kale Deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho oo ka mid ah deegaanada loo barakacay ayaa dad ku howlanaa gudashada Salaada ciida waxaa lagu rasaas xoog leh wallow aanay sababin rasaastaasi dhimasho iyo dhaawac midna.
Dhanka kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay waxaa iyana laga qabqabtay 50 ruux dad ka badan oo quud dareynayay salaada ciida in ay ku tukadaan masaajidyo ku yaala xaafadaha kale duwan ee magaaladaasi.
Dadka la xirxiray iyo kuwa rasaasta lagu kala eryay intuba waxa ay ahaayeen kuwa ay u cuntami waayeen amaro kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka soo baxay kuwaa oo dadka loogu baaqay in ay ku soo tukadaan salaadda Ciida gooba cayiman oo iyaga ay diyaariyeen.
Tallaabooyinka xanuunka badan iyo ammarada sanduladda ah waa ku ka caada u noqday kooxaha dowladda diidan iyadoona mar walba la maqlo iyagoo ku baaqaya in si xooga ah lagu dar dargaliyo rabitaankooda.